Home > Tigidhada tareenka ICE ee jaban iyo Qiimaha Wadooyinka Safarka
Twuxuu calaamadeeyay tareenka ICE ee nidaamka tareenka Jarmalka ee isku xira magaalo kasta oo Jarmalka ka mid ah.
Waddooyinka caalamiga ah ee ICE waxaa ka mid ah Faransiiska, Belgium, Denmark, Austria, Holland, iyo Switzerland.
Intercity-Express ama magaca toobiye ICE waa nidaam ka mid ah tareenada-xawaaraha sare oo ay leedahay shirkadda Deutsche Bahn, Bixiyaha tareenka ee Jarmalka. The Tareenka ICE are known for luxury, xawaare, iyo raaxo maadaama ay isku xirayaan magaalo walba oo ku taal Jarmalka.
Wadooyinka Safarka ee ICE kuma koobna oo keliya Jarmalka. Tareenka wuxuu maraa waddooyinka caalamiga ee aada Austria, France, Belgium, Switzerland, Denmark, iyo Nederland.
Hubinta safarkaaga iyo taariikhda bixitaankaaga waxay kuu badbaadin doontaa lacag khidmad soo celin ah. Qadarka lacag celinta iyo ikhtiyaarka soo celinta tikidhada ICE ee aan la isticmaalin waxay kuxirantahay nooca tikidhka aad iibsato. Sidoo kale, lacagta soo celinta ayaa ka hooseysa tikidhada safarka ee badbaadinta marka loo eego tikidhada caadiga ee tikidhada. Ogsoonow in DB aysan ku soo celin doonin lacag ahaan markaad tigidhkaaga soo celiso. Soo celinta DB waxaa lagu sameeyaa foojarrada DB, taas oo aad ku isticmaali karto si aad ugu bixiso adeeg kasta oo ay bixiyaan. Waxaad sidoo kale iibin kartaa kanaga Tikidhada tareenka ee ICE online on internet forums if you wish to get the money back.
Tigidhada ICE waa ka raqiisan yihiin xilliyada ugu sarreeya (Talaado, Arbacada, Khamiista, iyo Sabtida). Inta lagu jiro maalmaha ugu sarreeya, tikidhada jaban ayaa si dhakhso leh loo iibiyaa, oo ka tagaya kaliya tikidhada Flexpreis. Si aad ugu safarto maalmaha Peak, horay u sii qabso buug si aad u hesho tigidhada safarka. Haddii aadan heli karin tikidhada safarka kaydka, iska hubi inaad safartid inta u dhaxaysa subaxa hore iyo galabtii (sababta oo ah safarro ganacsi awgeed) maadaama tikidhada Flexpreis ay ka jaban yihiin markaa. Ugu dambayn, iska ilaali safarka dadweynaha and school holidays maadaama qiimaha tikidhada 'ICE' ay sidoo kale kordhin doonaan.
Qiimaha tigidhada ICE-da ayaa kuxiran nooca tigidhada iyo heerka kuraasta aad rabto. Guud ahaan, tareenka Jarmal is famous for its low ICE ticket prices. Waxaa jira seddex nooc oo tikit ah oo loogu talagalay tareenka ICE - tigidhka caadiga ah ama Flexpreis, tikidhada tikidhada Supersaver ama Supersparpreis, iyo kharashka keydka ama tikidhada 'Sparpreis ICE'. Tigidhada safarka ee badbaadada ayaa ka jaban tikidhada caadiga ah, laakiin tigidhada la heli karo ayaa yaraanaya iyadoo maalinta bixitaanku soo dhow yahay. Qiimaha tigidhada ICE ku tiirsanaanta fasalka aad doorato oo halkan waxaa ku yaal miis la soo koobey oo ah qiimaha celceliska fasal kasta:
3) Tareenadu waa kuwa deegaanka u fiican. The Tareenka ICE sidoo kale waa deegaanka u roon ka badan diyaaradaha, kuwaas oo gacan ka geysta wasakhowga hawada. Ku safridda tareenka waa × ka yar tahay wasakheynta kaarboonka hawada ka siixeysa safarka hawada.
Iyada oo ay khusayso tigidhada iyo qaybaha fasalka ee tareenka ICE, nooc kasta oo tigidh ah wuxuu ku jiri karaa fasalka koowaad. This means that even the tikidhada tareenka jaban ee ICE, qiimaha badbaadada, iyo Super sparpreis waxay awoodaan kuraasta heerka koowaad. Si kastaba ha ahaatee, Qiimaha wuu kala duwan yahay labada fasalba, sida kor lagu soo arkay.
Kuraasyada qolka-fasalka koowaad waa ka weyn yihiin oo loo habeeyey si ka duwan a 2-1 diyaarin halkii la a 2-2 ee fasalka labaad. Tanina waxay u fasaxaysaa rakaabka meel bannaan oo badan. Waxaa intaa dheer, kuraasta fasalka koowaad ee ICE sidoo kale waxaa lagu daboolay maqaar faux ah waana ka weyn yihiin kuwa ku jira fasalka labaad. Maaddaama ganacsatadu caadi ahaan isticmaalaan fasalka koowaad, waxaa jira miisas adag oo loo heli karo rakaabka doonaya inay xoogaa shaqo ah qabtaan inta ay safarka ku jiraan.
Adeegyada dheeraadka ah ee kala saara fasalka koowaad iyo fasalka labaad ee tareenada ICE waxaa ka mid ah bilaash, wargeysyada maalinlaha ah, bilaash ah WI-FI, iyo cod-bixiyeyaasha gaarka ah si looga hortago carqaladeynta soo dhaweynta taleefanka gacantu. Rakaabka Fasalka Koowaad sidoo kale waxay ka dalban karaan cunnooyinkooda kuraasta haddii aysan rabin inay aadaan makhaayada saaran tareenka.
Qeybaha Fasalka Labaad kama fog fog Fasalka Koowaad si raaxo leh. Intaa waxaa dheer, kuraasta ku jirta qaybta fasalka labaad ayaa ka fiican celceliska kuraasta diyaaradaha. Plus, iyagu waa ergonomic, la imow madax xiiran, waxayna ku daboolan yihiin maro wanaagsan. Tani waxay ka dhigeysaa safar masaafo dheer oo raaxo leh.
Waxaa jira qaybo badan oo fasalka labaad ah oo ICE tareen ah oo kabadan kuwa Fasalka Koowaad. gaar ahaan, habeynta fadhiga ee fasalka labaad way ka yara adag tahay ta fasalka koowaad. Saf walba waxaa jira afar kursi (2-2 qabanqaabada kursiga), iyadoo labada kursiba ay wadaagaan gacanta dhexe.
dheeraad ah, Rakaabka kujira fasalka labaad waxay marin uhelaan qaar kamid ah adeegyada fasalka koowaad laakiin leh xad. Qaado WI-FI tusaale ahaan. Fasalka labaad, Wi-Fi ma aha mid aan xadidnayn sida loogu talagalay rakaabka fasalka koowaad. Rakaabka fasalka labaad sidoo kale ma heli karaan wargeysyo maalinle ah oo lacag la’aan ah sidaa darteed haddii aad jeclaan lahayd inaad wargeys ka hesho fasalka labaad, waa inaad mid iibsato.
Rakaabka dabaqadda labaad waa inay aadaan makhaayadda haddii ay rabaan inay dalbadaan cuntada. Kama dalban karaan kuraastooda maaddaama ay ku jirto qaybta fasalka koowaad ee ICE. Sidoo kale, ICE tigidhada fasalka labaad ee Flexpreis iyo qiimaha kaydka labadaba si otomaatig ah uma daboolaan boos celinta boosaska. Hadaad jeceshahay inaad kursi dhigatid fasalka labaad, waa inaad bixisaa lacag dheeraad ah oo ah € 6. Sidoo kale Rakaabka Fasalka Koowaad iyo Labaadba waxay leeyihiin koronto kursi kasta oo ay dhigtaan.
ICE offers rail passes at cheap ICE Train prices safarka aan xadidneyn ee guud ahaan Jarmalka ama Yurub. Waxaa jira saddex nooc oo kaararka tareenka ah:
Kaarka tareenka ee Jarmalka waa socdaal aan xadidneyn oo gudaha Jarmalka ah. Sidoo kale, waxaa loogu talagalay dadka safarka ah ee aan ku noolayn Yurub, Turkey, iyo Ruushka. Faa’iidooyin yar oo laga helo Jidka Tareenka Jarmalka waxaa ka mid ah:
Kaarka Eurail wuxuu u oggolaanayaa dadka aan reer Yurub ahayn ee ku nool dibedda Ruushka, Europe, iyo Turkiga inay u safraan Yurub oo aan xadidnayn. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
PassR-ga InterRail wuxuu siiyaa dadka ku nool Ruushka, Turkey, ama safar aan xadidneyn oo Yurub oo dhan ah. Joogtada ah ee kaararkaan waxaa ku jira:
Discounts on Tikidhada tareenka ee ICE dadka da'da yar iyo kuwa waaweynba.
Si loo hubiyo inaad ku timaado waqtigii aad fuulaysid, xasil, and even ka baadi dukaamada, waxaa lagugula talinayaa inaad ugu yaraan timaadid 30 daqiiqado ka hor waqtiga bixitaankaaga.
Jadwalka tareenka ayaan la hagaajin, taas oo adkeyneysa in jawaab laga bixiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli kartaa jadwalka tababarka ICE-waqtiga dhabta ah bogga hoyga A A Save. Geliso asalkaaga iyo halkaad u socoto isla markaana hel marin deg deg ah dhammaan jadwalada tareenka ICE. Tareenka ugu horreeya ee ICE ayaa tagaya 6 waxaan ahay, iyadoo tareenadu mid walba tagayaan 30 daqiiqado u taga meelaha waaweyn.
Wadooyinka caalamiga ah ee ICE waxay ka baxaan dhowr xarumood oo caalami ah, waxaa ka mid ah Brussels Midi Zuid (Brussels Midi South Station oo ku taal Ingiriis), Bartamaha Arnhem, iyo Amsterdam Central, iyo qaar badan oo.
Magaalada-Express (ICE) waxaa iska leh bixiyaha tareenka qaranka ee Jarmalka, Deutsche Bahn, iyo DB waxaa iskaleh Dowlada Federalka Jarmalka.
ICE ugu horreyn waxay dhex martaa dhammaan magaalooyinka Jarmalka. Waxaa jira qaar caalami ah ICE travel routes wadamada qaar xuduudu Jarmalka.
Tareenka ICE wuxuu ku bixiyaa cuntada transit-ka halkaasoo menu-ku ka kooban yahay cunno, cunto fudud, iyo sharaabka nooc kasta. Intaas waxaa sii dheer, waxaa ku yaal dekedo lacag bixiya oo kursi kasta ku xiga, free WiFi (aan xadidneyn Fasalka Koowaad), iyo qeylo-dhaannada loogu talagalay soo dhaweynta taleefanka gacmeed aan kala joogsanayn (kaliya fasalka koowaad).
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-ice/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.